Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Magacaabista Abiy Axmad Maxay Iska Shabahaan Midii Workneh Gebeyehu?
Faallo: Magacaabista Abiy Axmad Maxay Iska Shabahaan Midii Workneh Gebeyehu?
Posted by Dayr	/ April 2, 2018
Tan iyo intii la magacaabay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Gumaysiga Itoobiya waxaad arkaysaa dad badan oo siyaabo kala gadisan dareenkooda uga muujinaya.
Khubarada iyo ku xeel dheereyaasha dhaqanka Gumaysiga Itoobiya ayaa iyagu mar kasta si taxadar iyo feejignaan leh uga falceliya talaabooyinkan noocan oo kale ah oo kamid ah dhaqamada Gumaysiga.
Hadaba waxaa xusid mudan in aan dul joogsano farqiga u dhexeeya ninkan la magacaabay ee lagu wado in uu noqdo Ra’iisul Wasaaraha wadanka iyo magacaabistii tan ka horaysay ee lagu magacaabay Wasiirka Arimaha Dibada, Workneh Gebeyehu.
Labadan nin ayaa ku yimid magacaabistoodu culays xaga shacabka kayimid, labaduba waxay ku yimaadeen duruufo aad iskugu dhaw balse la odhan karo wax badan bay iska shabahaan. Labadan nin ayaa mudo dheer kasoo mid ahaa taliskii Woyaanuhu hogaanka u hayay. Waxay kamid yihiin kuwooda sida hagar la’aanta ah Woyaanaha ugu shaqayn jiray.
Dr.Abiy Axmad iyo Workneh Gebeyehu waxay kasoo jeedaan Qawmiyada Oromada, waxay xilal kala duwan kasoo qabteen maamulkii kala duwanaa ee Woyaanaha. Magacaabistii Workneh Gebeyehu laguma guulaysanin taasoo ahayd in lagu dajiyo shacabka kacdoonka wada ee Oromada. Waxaa kale oon lahubin in Dr.Abiy Axmad lagu guulaysan doono magacaabistiisa iyo inkale.
Wixii dhici-doona mustaqbalka dhaw ayeynu u dayn doonaa laakiin qaabka xulashadu aadbay isugu eg-tahay, waxayna u muuqataa inaysan wax badan ka badali doonin xaalada guud ee dalku ku sugan yahay. Waxaa xusid mudan inayna hormuudka Oromadu ku deg-degin inay isticmaalaan erayga “Hambalyo” laakiin waxay isku bar-bar wadaag laba arrimood;
1) inay ninkan si uun rajo-qab ah ku soo dhaweeyaan iyagoo mustaqbalka ku xidhaya wixii uu sameeyo iyo inay beesha caalamka u muujiyaan niyad-samaan si aan loo odhanin kuwan (Oromada) waa dad aan wanaag rabin.
2) waxay ku jiraan feejignaan iyo taxadar dheeri ah waxaana loo diyaar-garoobayaa wareeggii labaad ee halganka haddii uu nidaamku si deg-deg ah uga jawaabi waayo dalabaadkii shacabka Oromiya iyo guud ahaan Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee waxaan shaki kujirin in saraakiisha Woyaanaha eek u naaxay dhiiga shacabka aysan si fudud kusoo xulanin Dr.Abiy Axmad, balse ay aad ugu kalsoon yihiin in uu yahay maqaar-saar aan waxba kusoo kordhin Karin xaalada manta jirta.